Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Italy » Sida Looga Hortago Khatarta Musharaxnimada Berlusconi ee Talyaaniga
Lahaanshaha sawirka Mathieu Cugnot, Abuuraha, © Midowga Yurub 2019
Dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee midigta dhexe waxay si rasmi ah ugu adkaysanayaan inay Silvio Berlusconi u magacaabaan Quirinale. Tani lafteedu waa arrin halis ah, oo ay tahay in sidaas loola dhaqmo, si ka baxsan xeelado ama dagaal.
Silvio Berlusconi waa maalqabeen dhanka warbaahinta ah oo Talyaani ah iyo siyaasi u soo shaqeeyay sidii Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Afar dawladood oo kala ah 1994-1995, 2001-2006, iyo 2008-2011. Sida uu u isticmaalay hay'adaha iyo awoodiisa, Berlusconi wuxuu ahaa hoggaamiyihii siyaasadeed ee khatarta geliyay dimuqraadiyadda xorta ah, ka dib Donald Trump, Galbeedka. Oo uu si nidaamsan u jebiyey mabaadiida, ayuu qoray Emanuele Felice, saxafi ka tirsan Domani maalinlaha ah.
Haddii maanta la dooran lahaa, waa la dooran lahaa sababtoo ah waxaa loo caleemo saaray laba hoggaamiye sida Salvini iyo Meloni oo si cad u tixraacaya dimoqraadiyadda aan xorta ahayn ee Orban, Putin iyo Trump. Natiijadan oo kale waxay ceeb ku noqon doontaa Jamhuuriyadda Talyaaniga, sababo la xiriira anshaxa iyo siyaasadda iyo garsoorka dabiiciga ah. Waxay calaamad u noqon doontaa dhicitaanka hay'addeenii ugu qiimaha badnayd, laga soo bilaabo dhufays dammaanad ilaa qalab suurta gal ah kacaanka xorta ah ee dalkeena, ayuu yidhi Felice.
Hadda, si loo fahmo calaamadaha hareeraha, waxay u muuqataa dhacdo aan macquul ahayn. Gariirada hore, waxaa jira farqi, calaamad muujinaysa in tirooyinka ay adag yihiin. Laakiin inkastoo ay taasi jirto, xulafadu waxay sii wadaan inay si rasmi ah u taageeraan isaga, sidoo kale iyaga oo leh quudhsasho gaar ah oo lagu qoslo (waxay waydiisanayaan Berlusconi inuu "kala diro kaydka la haysto ilaa hadda" ka dib kulan ka dhacay gurigiisa).
Waa xaqiiqo ka hadlaysa dabeecadda xudunta dhexe ee aan ku leenahay Talyaaniga. Wuxuu ku darayaa xaqiijinta dabeecadda hoggaamiyeyaasha sida Matteo Salvini iyo Giorgia Meloni. Waxa intaa dheer in Berlusconi laftiisa, marka hore kuwaas oo waa in ay ogaadaan xaaladda iyo halkii ay ku qasbi dalka in imtixaankan ceeb iyo khatarta ah, dhammaanteen, hortooda dunida oo dhan - iyo in daqiiqad sida.
Midigta dhexe ee talyaanigu waxay markaa xaqiijinaysaa inay tahay mid aan si qoto dheer u furfurnayn, dhiiranaan, iyo masuuliyad darro.
Sida waddan kale oo ku yaal Galbeedka Yurub (laga yaabee in isbarbardhigga kaliya ee wali taagan yahay kan Mareykanka, halkaas oo Jamhuuriyadu ay afduub u haystaan ​​Trump).
Dhexda-bidix waa inay iska ilaalisaa samaynta khalad dilaa ah. Ka saar Berlusconi oo u codee magac kale oo midigta dhexe ah, kaas oo aan ahayn "kala qaybin." Natiijadan oo kale waxay weli guul u tahay Berlusconi iyo dhammaan midigta dhexe, middaan-midig. Waxay la macno tahay in la aqbalo suurtogalnimada Berlusconi oo ah bar bilow u ah wada xaajoodka.
Pd iyo Cinque Stelle waa inay sidoo kale ka fogaadaan khaladka lidka ku ah oo ay isku dhejiyaan xanaaq. Waxaa laga yaabaa in ay soo jeediyaan musharax calan ah, sidaas darteed ayidayaan fikradda Talyaanigu laba u kala qaybsan yahay taas oo xisbi kastaa, ka dib, uu xaq u leeyahay in la sharciyeeyo oo uu galo isku dhacyada khatarta ah in laga badiyay.
Waa lagama maarmaan in laga falceliyo iyada oo diiradda la saarayo jaantus aad u sarreeya, oo aan loo nisbayn labada dhinac midkoodna, sidaas darteed, awood u leh inuu soo galo xitaa codbixiyayaasha midigta dhexe ee wareersan. Waa shakhsi awood u leh in uu guulaysto isaga oo aan u tanaasulin wada xaajoodka kuwa khatarta ku ah hay'adahayaga ugu sarreeya laakiin aan naftiisa u huray markhaatifurid.
Xusuus-qorka Qoraaga: Dareenka guud ee siyaasiyiinta iyo warbaahinta badankoodu ee Mr. Berlusconi ayaa ah kuwo nacayb ah in ay xumaan tahay.
Maqaalkani waa ra'yi uu qoraagu leeyahay.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan Talyaaniga
Europe Italy Galbeedka Yurub
Khibraddiisu waxay ku fidday adduunka oo dhan ilaa 1960-kii markii da'da 21 jir uu bilaabay sahaminta Japan, Hong Kong, iyo Thailand.
Mario waxa uu arkay Dalxiiska Adduunka oo kor u kacaya ilaa hadda oo uu markhaati ka yahay